Yin Yin Kyaw | Animal Health
Loving your pets make you feel better
Pets are part of our families. Taking care of your beloved pets make your days more meaningful and happier.
A place to learn how to raise your farm. (Vaccination, Deworming, Common diseases and Biosecurity.)
မွေးမြူပညာ မျှဝေရာ၊ ယဥ်ယဥ်ကျော်မှာ လေ့လာပါ။
One stop market place for all kind of animal products, food, vaccines and instruments.
Service In Yangon
Efortless Validation for animal professionals
5.4 mg, 16 mg Apoquel is the first choice of veterinarians for fast allergic itch relief. ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားယားယံမှုများအတွက် ဆရာဝန်များရဲ့ ပထမဦးစားပေးရွေးချယ်မှု Effective in flea allergy, food allergy, contact allergy, atopic dermatitis. When it comes to relief from allergic itch without steroid side effects အကျိုးကျေးဇူးများ ဆေးတိုက်ပြီး (၄) နာရီအကြာမှ စတင်ပြီး အရေပြားယားယံခြင်းကို တဖြည်းဖြည်းသက်သာစေပြီး (၂၄) နာရီအတွင်းတွင် ယားယံမှုကို သိသိသာသာလျော့နည်းစေပါသည်။ ယားယံမှုသက်သာစေရန်တိုက်ကျွေးရသော steroid များကဲ့သို့ ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေသည့်အတွက် long term therapy အနေနှင့် တိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးတိုက်ရန် မလိုတော့သည့်အခါတွင်လည်း steroid များကဲ့သို့ ဆေးပမာဏကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့သွားစရာမလိုဘဲ ဆေးတိုက်ခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်လိုက်နိုင်ပါသည်။ ပိုးသတ်ဆေး၊ အရောင်ကျဆေး၊ သန်ချဆေး စသည့် ဆေးများနှင့်လည်းအတူတွဲပြီး သုံးနိုင်ပါသည်။ ဆေးတိုက်ကျွေးနေချိန်ကာလအတွင်းတွင်လည်း ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးမှုမျာကို အဟန့်အတားမဖြစ်စေပါ။
PRRS BG08 STRAIN (10 doses)
ဆေးအညွှန်း Porcine reproductive & respiratory syndrome ( PRRS) ခေါ် ဝက်မျိုးပွါးနှင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ (ပြင်းထန်ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါ) ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ၂၁ - ၂၈ ရက်အတွင်း ဝက်နားရွက်ပြာရောဂါကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမှာ ၄ လ မှ ၆ လ အထိ သက်တမ်းရှိပါသည်။ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ PRRS ရောဂါနှင့် ကိုက်ညီသော ကာကွယ်ဆေးကို တင်သွင်းဖြန့်ချိပါသည်။ ***ကျန်းမာသော ဝက်များတွင်သာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရန်။
Chewable Tablets for Dogs (US FDA Approved)
ဆေးတစ်မျိုးတည်းနဲ့ သန်း၊ မွှား၊ လှေးများသာမက ဝဲပိုးအမျိုးမျိုးကို ထိရောက်စွာနှိမ်နင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံလို့ လွယ်လွယ်ကူကူဝါးစားနိုင်တယ်။ တစ်လ တစ်ကြိမ် ဆေးတစ်ပြားနှုန်းတိုက်ကျွေးပါ။ Works fast and lasts ဆေးအာနိသင် အမြန်ဆုံးပြပြီး ကြာကြာခံပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးများ • အသက် ၆လသားမှစပြီး တစ်လတစ်ကြိမ် တိုက်ကျွေးနိုင်။ • ဆေးတိုက်ပြီး မွှား၊ လှေးများကို အမြန်ဆုံးသေစေနိုင်ပြီး ၅ ပါတ်အထိ ဆေးအာနိသင် မပြယ်ပါ။ • ဆေးတိုက်ပြီး ၈ နာရီ အတွင်း မွှားများကို သေစေနိုင်ခြင်း။ • ဆေးတိုက်ပြီး ၃ နာရီအတွင်း သန်း၊ လှေးများကိုသေစေနိုင်ခြင်း။ ဥမျုားမှ အသစ်ပေါက်ဖွားလာသော သန်း၊ လှေးများအားနောက်ထပ်ဥမဥနိုင်ခင် သေစေနိုင်ခြင်း။ • Demodex canis, Sarcoptes scabiei, Otodectes cynotis (Ear Mite) စသည့် ဝဲပိုးများကြောင့်ဖြစ်သော အရေပြားရောဂါများတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ • Flea Allergy Dermatitis (FDA) အရေပြားယားနာရောဂါများ ကုသရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း။ • ဆေးတိုက်ပြီး ၃၅ ရက်ကြာသည်အထိ ဆေးအာနိသင်ကျဆင်းမှုမရှိခြင်း။
Our Products Avaliable
Search, Explore and get instructions for animals products, foods, vaccines, instruments and order ataglance.
New Products Selling Items
Piggy Boost (100 ml) , Raizup Co.Ltd, France.
PIGGYBOOST (100 ml) ပစ်ဂီဘု မွေးကင်း� Continue Reading...
Ferti Crunch ,Raizup Co.Ltd , France.
Ferti Crunch Heat,fertility and prolificacy Complementary feed for s Continue Reading...
Diroheart - S ( 1x6 Tabs) /Ashish Life Science Pvt.Ltd (India)
DIROHEART-S (Ivermectin & Pyrantel Chewable Tablet) ခွးနှ� Continue Reading...
Focus Puppy 100 g (1 pc)
Focus (Super Premium All Breed Formula) ပါဝင်သောပ� Continue Reading...
Drools Adult 400 g (1 pc)
Drools Chicken & Egg Adult (400g) ပါဝင်သောပစ� Continue Reading...
Adult Chunks in Gravy 150 g (1 pc)
Adult Chunks in Gravy 150gm ပါဝင်သောပစ္စည� Continue Reading...
Puppy Chunks in Gravy 150 g (1 pc)
Puppy Chunks in Gravy 150gm ပါဝင်သောပစ္စည� Continue Reading...
Drools Puppy 400 g (1 pc)
Drools Chicken & Egg Puppy (400g) ပါဝင်သောပစ္ Continue Reading...
Drools Puppy 100 g (1 pc)
Drools Chicken & Egg Puppy (100g) ပါဝင်သောပစ္ Continue Reading...
Focus Puppy 1.2 kg (Drools, India)
Super Premium All Breed Formula Corn & Wheat – Free Formula Cont Continue Reading...
Absolute Calcium Bone (Drools, India)
Absolute Calcium Bone Animals Feed Supplement Composition Each cont Continue Reading...
Felinepro Canned Food (85 g)
Tuna Whole Loin with Rice in Jelly တူနာငါး အရသာ Continue Reading...
Drools Chicken & Egg Puppy (400gm & 1.2kg)
ကြက်သားအသားကောင်းများနှ� Continue Reading...
Drools Chicken & Egg Adult (400gm & 1.2kg)
Piglet Incubator(China/ Shandong Muge Co.,Ltd)
Piglet Incubator ဝက်ကလေး အနွေးပေးအိ Continue Reading...
Pig Dry And Wet Feeder(China/ Shandong Muge Co.,Ltd)
Pig Dry And Wet Feeder ဝက်ကြီးအော်တို� Continue Reading...
Piglet Electric Heating Plate (China/ Shandong Muge Co.,Ltd)
Piglet Electric Heating Plate ဝက်ငယ်အနွေးပေ Continue Reading...
Piglet 304 Stainless stetel Feeder(China/ Shandong Muge Co.,Ltd)
Piglet 304 Stainless stetel Feeder ဝက်ငယ်လေး အစ Continue Reading...
KS97 Red Lick Block (2 kg) (Dairyline, Thailand)
Mineral Lick Block for Dairy, Cattle, Buffalo Continue Reading...
QM-Hepavitol + B Complex (1 L) (Mega Farm, Vietnam)
Composition: each 1000ml solution contains: Sorbitol ……….. 500. Continue Reading...
QM-Ferron B.Comp 100 ml (Mega Farm, Vietnam)
QM-FERRON B.COMP INJECTION (100 ml) (ဖာရွန်ဘီကွ� Continue Reading...
Navet Gentasin 100 ml (Navetco, Vietnam)
Navet-Gentasin (Injectable Solution) (နာဗက်ဂျန်တ� Continue Reading...
Salcochek (50 g) (Ayurvet, India)
ဆယ်ကိုချက် (ဝမ်းပိတ်ဆေး န� Continue Reading...
Ayumin V5 (1 kg) (Ayurvet, India)
AYUMIN V5 (1 kg) (အာယုမင်ဗီဖိုက်, နိ Continue Reading...
Charmil Plus Gel (50 g) (Ayurvet, India)
ဆေးဖက်ဝင်အပင်ပစ္စည်းမျာ� Continue Reading...
Charmil Plus Gel (25 g) (Ayurvet, India)
Exapar 500ml Emulsion (Ayruvet/India Co.,Ltd)
Exapar Uterine Cleanser & Restorative Continue Reading...
Charmil Spray 100ml(Ayurvet/India., Co.,Ltd)
(ဆေးဖက်ဝင်အပင်ပစ္စည်းမျာ Continue Reading...
ကြက်၊ ဘဲ ဝမ်းကျ နှင့် အီးကိုလိုင်ရောဂါ နှစ်မျိုးပေါင်း ကာကွယ်ဆေး (အကောင် ၁၀၀ စာ)Fowl Cholera and E.coli Vaccine 50ml
(Navetco, Vietnam) Poultry Pasteurella and E.coli (Inactivated Vaccin Continue Reading...
Himmvac DHPPL (5 in 1 ) (KBNP, Korea)
ခွေးရောဂါငါးမျိုးပေါင်း� Continue Reading...
Raksharab (ARV) (Indian Immunological, India)
ဆေးအညွှန်း၊ ကျန်းမာသောခ� Continue Reading...
Rakasha Ovac (FMD) Vaccine
Rakasha Ovac (FMD) Vaccine (Indian Immunological, India) Raksha Ova Continue Reading...
DONOBAN - 10 ACTINOBACILLUS (10 in 1), KBNP (Korea)
Donoban – 10 (ဒိုနိုဘန် - ၁၀) ဝက်အသ Continue Reading...
HIMMVAC BN (LASOTA) Live Vaccine, KBNP (Korea)
Himmvac BN (LaSota) Live Vaccine ကြက်အိုင်ဘီအ Continue Reading...
Learn how to take care of your beloved pets
©2022 Yin Yin Kyaw | All Rights Reserved.